दुबई का;ण्ड भन्दै यी नेपाली युवतिको हेर्नै नसकिने २ मिनेट २२ सेकेन्डको भिडियो भाइरल ! – News543Online
February 21, 2021 adminLeaveaComment on दुबई का;ण्ड भन्दै यी नेपाली युवतिको हेर्नै नसकिने २ मिनेट २२ सेकेन्डको भिडियो भाइरल !
उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टे, स्टिक्यूलर क्या,
न्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शा;री;रिक रुपमा त महिला हुन् तर आ;नुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । म दुईटा श्रीमान
राख्छु, मान्छ त यो समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुईटा श्रीमान राख्न दिंदैन ?रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा
चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो वि ,किनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो
हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
नुहाउन पोखरीमा पसे तर निस्कन पाएनन्, एकै पटक पाँच जना बालिकाहरूको नि’धनले गाउँ शो’कमा😭😭😭